S henzhen Ariza Electronic Co., Ltd rakaumbwa muna 2009 uye fekitari rayo riri Shenzhen. With10 makore okukura, kubva OEM kuna ODM, tinobhadhara zvikuru uye yakawanda itsva zvigadzirwa kukura, zvakagadzirirwa siyana dzakakurumbira yokutevedzera pamwe Ariza zvinhu uye varidzi patents, mienzaniso izvi zvose zvikuru yakatenderwa edu nemakasitoma munyika dzose.
Pazvese, isu vakanyorwa kwedu muchiso ARIZA, Bell mwanakomana muna USA, Japan uye China zvinobudirira.
A riza chaitwa kuchengeta yakakwirira risanyatsobuda uye zvinopa basa zvakakwana uye mhinduro, kuti nguva dzose kukwanisa kusangana mutengi zvinodiwa. Nokuti achivapa yamunenge basa, Ariza akaita vakasuma dzakasiyana-siyana itsva B2B uye B2C okutengesa nzira. Pamwe chichiitwa utsanzi kudzingana pakukwana, Ariza ine unyanzvi Quality Management System kubva kusimbiswa.
Basa redu kubatsira munhu wose kurarama yakachengeteka upenyu. zvakanakisisa-mu-kirasi tinorupa kuchengeteka, musha kuchengeteka, uye mutemo vatevedzere zvigadzirwa kuti maximize kuchengeteka kwako. Tinoedza kudzidzisa uye simba vatengi dzedu - naizvozvo, muna ngozi, iwe nevadiwa vako vari vakapakata zvigadzirwa simba kwete chete, asi ruzivo pamwe. Tinotenda wose anofanira kudzivirirwa saka vanogona kurarama upenyu yakachengeteka, utano norugare rwepfungwa.